Akhriso Jadwalka hadal-jeedinta Mas’uuliyiinta | KEYDMEDIA ONLINE
Akhriso Jadwalka hadal-jeedinta Mas’uuliyiinta
Waxaa la filayaa in goordhaw ay billaabato xafaladda saxiixa heshiiska doorashadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa lasoo saarey jadwalka hadal-jeedinta Mas'uuliyiinta ka qeybgalaysa munaasabadda lagu saxiixayo heshiiska doorashadda ee lagu gaarey wadahadalladii afarta maalmood qaatey ee dhex-maray Rooble iyo Madaxda Maamullada.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo qaban-qaabisay xafladda iyo casuumaadda, iyadoon soo saartay liiska madaxda khudbadaha jeedin doono, oo uu ku jiro Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxdii ka horeysay iyo qaar kamid ah Musharixiinta.
Heshiiskan maanta la saxiixayo ayaa ah midkii Sep 17 oo wax yar laga bedelay, iyadoo meelaha muranka uu ka taagnaa dib loogu laabtay, sida degaan doorashadda, oo markii hore labo magaallo ahayd, oo hadda la filayo in hal magaalo lagu soo koobo.
Sababta degaan doorashadii hore loogu laabtay ayaa ka dambeysay kadib markii caqabado ka yimaadeen Garbahaarey oo Axmed Madoobe laga diiday, Beledweyne oo Guudlaawe aan laga taageersanayn maamulkiisa iyo Baraawe oo amniga looga baqay.